Wararka - Horudhaca waxqabadka alaabta
Beijing Wistron Technology Ltd. Qalabka Gaadiidka Co., LTD. soo saara barafka cadceedda waddada iyo indhaha bisadaha LED -ka cadceedda ayaa iftiimiya Koonfur -bari Aasiya. Warshadaha baraha cadceedda ee Wistron waxay gacan ka geystaan ​​yareynta tirada shilalka waddooyinka iyo dhimashada qaar ka mid ah waddooyinka dhimashada ee gaarka ah.
Beijing Wistron Technology Ltd. oo ah shirkad ku takhasustay naqshadaynta, soo-saaridda, keenista iyo rakibidda baraha cusub ee tiknoolajiyadda sare ee cadceedda ee LED-ka. Istuudiyaha waddada cadceedda ee LED -ka ayaa iftiiminaya waddada halista ah ee hormarta waddada weyn iyo waddada Koonfur -bari Aasiya. Kahor intaanan halkan ku rakibin istuudiyaha waddada qorraxda ee LED, waddada qalooca ee Koonfur -bari Aasiya oo sidoo kale loo yaqaan “Tunnel of Death” waa mid ka mid ah waddooyinka ugu halista badan dhammaan waddanka Koonfur -bari Aasiya. Darawalo badan ayaa had iyo jeer ku dhaca shilal halis ah oo dilaa ah wadadan qaloocan, cidhiidhi ah oo mugdi ah. Laakiin qorraxda waddada qorraxda ee LED -ka ayaa badbaadiya noloshooda.
Beijing Wistron Technology Ltd. taxanaha cusub ee tiknoolajiyadda korontada cadceedda ee korontada ku shaqeeya ayaa ahaa tusaalaha ugu weyn ee loo adeegsaday mashruucan gaarka ah. Mid kasta oo ka mid ah farsamada sare ee qorraxda waddada LED-ka ee taxanaha iftiinka Wistron Traffic ayaa lagu rakibay aasaaska waddada, taasoo abuurtay saamayn bilig iyo digniin leh.
Jawaab celinta mashruuca iftiiminta barafka ee waddada qoraxda ee Wistron ee waddada qalooca ayaa aad u wanaagsan oo lagu guulaystay illaa hadda. Darawalo badan oo hadda u soo dhowaada wadadan halista ah habeenkii ayaa si aad ah ugu qanacsan aragtida fog ee ay keeneen qalabka cusub ee farsamada sare ee qoraxda LED-ka, kaas oo gacan ka geysanaya ka-feejignaanta iyo digniinta darawalada khataraha soo socda ee ka jira waddada hore; gacan ka geysashada hagidda iyo ilaalinta darawalada si ammaan ah inta ay socdaan.